Sidee loo daawan karaa Game of Thrones 8 xilli leh OCS lacag la'aan ah? - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » shaneemo Sidee loo daawan karaa ciyaarta Saacadaha Thrones '8 xilli ay bixiso OCS lacag la'aan ah?
Sidee loo daawan karaa Game of Thrones 8 xilli leh OCS lacag la'aan ah?
GAME OF THRONES - Sannad kasta, barxadda OCS waxay bixisaa daawadayaasha si ay u ogaadaan ciyaarta Thrones socodka VOST. Dalab bilaash ah ayaa xitaa la siiyaa xilliga 8!
Isniinta 15 APRIL 2019, xilli 8 ah Game of Thrones waxaa laga helaa Faransiiska. adeegga Orange OCS bixiyaa khad 9,99 euros bishii (laba screens oo euros 11,99 hal screen), by si toos ah isku xirta OCS.fr. Dalabku waa mid aan khasab ahayn, taas oo kuu ogolaan doonta inaad soo daadiso Xeerka Thrones 8 adigoon samayn wax sanado ah. Xitaa ka sii fiican, OCS waxay bixisaa deeq hal bil oo bilaash ah, taas oo si wayn hoos ugu dhigi karta biilka (arag halkan), inkasta oo taxanuhu sii socdo 6 toddobaadkii si sax ah, ie, ilaa 19 laga yaabo.
Si looga fogaado lagu eedeeyay dhamaadka maxkamad free bil iyo ka dib warbaahinta ee Game of Thrones, aad si cad u maleynayaa baajiso uu rukun ka hor taariikhda guuradii lambarka ah. Fadlan ogow in baajinta maalinta ka dambeysa liidashada ay kuu ogolaanayso inaad ka faa'iideysato waxyaabaha ku jira OCS inta lagu jiro maalmaha 30. Si aad u raaxaysan Game of Thrones for free, oo kaliya si xisaab mari qaybtii ugu horeysay, si looga fogaado in qaswadayaasha, iyo qori Times taxanaha 19 ama 20 April helay ku dhamaaday 19 May ...
Macaamiisha Orange ayaa ka faa'iideysan kara sicirrada qiimaha leh iyo illaa bilaha 3 bilood bilaash ah oo loogu talagalay ujrada OCS. Waayo, macaamiishu SFR, arki Game of Thrones Streaming pass by sahayda OCS 100% Cinema Taxanaha at euros 12,99 bishiiba, iyadoo waajib kuma aha. Oo haddana, bisha koowaad waa la bixiyaa. Waa sii yara adag oo loogu talagalay macaamiisha Bouygues Telecom kuwaas oo si kastaba ha ahaatee qori karaa in bouquet ah ee silsiladood oo kale SCO 1 euro bishii bishii kowaad, ka dibna euros 12 bishiiba.
Game of Thrones socodka Isniinta ilaa saacadaha 3
Sida xusuusin ah, dhacdo 1 ee Game of Thrones xilli 8 sii daayay dalka Maraykanka habeenkii Axadda si Monday 14 15 April iyo SCO, ay qaybiyaha Faransiis, jeediyay simulcast ah. Xaaladda 1 waxaa laga soo duubay 3 aroortii Faransiiska oo ku yaalla OCS City qaybta luqadaha kala duwan: VF ama VOSTFR. Markaan horay loo sii wadi kari waayay, waxaa lagu soo bandhigi doonaa baahida OCS GO. Ugu dambeyntii, kuwa jecel inay daawadaan dhacdooyinka telefishinka, OCS City waxay hawada u soo saari doontaa saacadaha 21 Isniinta 15 APRIL.
Sidee u daawadaan 1 episode of Game of Thrones xilli 8? Si fudud u buuxi khariidadda OCS oo aad ku raaxaysatid mashruuca OCS GO kaasoo kuu ogolaanaya inaad ogaato dhacdooyinka Game of Thrones oo ka timaada 3 AM ee Faransiiska isla mar ahaantaana si toos ah u leh warbaahinta Mareykanka. Markaad kacsan tahay, 4 AM, dhacdooyin ayaa lagu heli karaa VOD. Ugu dambeyntii, kuwa daawanaya taxanaha shaashadda TV-ga waxay sidoo kale ka heli karaan Game of Thrones oo ka socda 21h oo ku yaala Kanaalka OCS. Macluumaadka, bouquet OCS channels ayaa laga heli karaa dhamaan bixiyeyaasha adeegga internetka (Orange, SFR, Numéricable, Bouygues, Bilaash) for 9,99 € bishii. Hadda waxaad haysataa kaararka oo dhan si aad u daawato 1 episode of Game of Thrones 8 xilli!
ciyaaraha xayawaanka 8 1 XNUMX buuxa french
Barnaamijka dhacdooyinka shineemada EDEN
Muusik: "Hoggaamiyeyaasha Les," shaqo cusub oo muujinaya mahadnaq ...
DADKA & LIFESTYLE3,083